Chii chinobatsira tei yeiyo?
Fitness Chikafu chakakodzera
Rimu rinotumbuka rinoratidzirwa nevakawanda kwete nekuda kwekunhuhwirira kwayo kusina kufananidzwa, asiwo nokuda kwezvikomborero zvakakura izvo muviri wevanhu unopa. Maruva anoshandiswa mumishonga yevanhu mumapurogiramu akasiyana-siyana aine chinangwa chokuvandudza muviri. Tichaona kuti tei inobatsira sei, yakawanda yakagadzirwa kumba. Kana iwe uchiunganidza maruva uri woga, zvadaro uzviite kure nemigwagwa uye mumiti yezvigadzirwa.
Chii chinoita kuti tei inobatsire mumucheka wearimu?
Nhamba huru yezvinhu zvinobatsira nekuda kwekuvapo kwehuwandu hwakawanda hwevhithamini nezvimwe zvikamu.
Kupfuura ruzivo ruyo rwemuviri:
Iko kunwa vitamini, iyo inobvumira kusimudzira kusachengetedzwa. Inobatsira kunwa iyo panguva ye hypothermia, kuti urege kurwara.
Inobatsira kugadzirisa zviratidzo zvekutonhora nekuputika. Tea inoderedza kupisa, ine expectorant uye diaphoretic migumisiro. Nekusimba yakakokera yeiyo chai inobatsira kubvisa phlegm.
Nehuwandu hwemhepo, iyo inwa inobatsira kuti idzose zvakare kune yakasarudzika.
Zvinobatsira zviyo zveiyo tei yevakadzi inosanganisira kukwanisa kwayo kurwisa mamwe mapaundi. Zvichida izvi zvinokonzerwa nekuti kunwa kunodzosera mvura yehutano uye kunokurudzira kubviswa kwezvinhu zvinokuvadza kubva kumitumbi. Inobatsira tei kunatsiridza metabolism , iyo inokosha pakurasika.
Pamusana pabonde rakanaka, inobatsirawo kugadzirisa muviri, uye zvichida izvi zvinokonzerwa nekuti vazhinji vezvinhu zvine zvimwe zvakafanana nemahomoni evanhukadzi. Kunyange huni inobva ku linden inowanzoita kumwedzi , inobvisa kuvhiringidza kwe genitourinary system, uye inoshandawo kana kushanda sekunyoresa panguva yekuenda kumwedzi.
Hazvigoneki kutora maitiro akanaka echinwiwa pane basa remagetsi emagetsi, ayo anobatsira kutsungirira kushungurudzika uye kunonoka. Tea yakagadzirwa kubva kuLinden ichabatsira nemagraine, musoro uye chizivo.
Nenzira inofadza inokanganisa kunwa pane basa remwoyo yematambudziko, nokuti inoita kuti midziyo iwedzere kuchinja uye inoderedza ngozi ye sclerotic plaques.
Une chimiro chekuvhiringidza, chinobatsira kubvisa zvinodhaka zvakanyanya, uye izvi zvinokubvumira kuti utsungirire kuzvimba.
Tichakuudzawo kuti tei inobatsira sei yevakadzi vane pamuviri. Kubvira mune izvi, zvinokurudzirwa kuramba kutora mahwendefa acho, kunwa kunobatsira kutsungirira zviratidzo zvokutanga zvehutano. Usave nepamuviri kuti unwe tiki kakawanda.
Chikoro chekuita gymnastics kubva kuDarya Lisichkina
Ungadya sei ne gastritis?
Inobatsira sei uchi mumangwanani pane chisina chinhu chiri mudumbu?
Makemikari zviri mumuviri womunhu
Nei Vitamin F inobatsira?
Nzira yekudzidzisa zvakadini?
Boiled chibage zvakanaka uye zvakaipa
Ginger ging for weight loss
Chikafu chakakodzera chevakadzi
Kushandiswa kwe halva
Zika virusi - zviratidzo
Kutumirwa kwema embryo kushandiswa
Beyonce akagadzirira kushamiswa kune vateveri
Zugzwang - chii icho uye kuti ungabuda sei?
Ndeipi pende iri nani kune denga?
Chiedza chekusimbisa michero
Ndeapi mahombekiti ehoveji inorarama?
Nzira yekubika sei mbeu yekunakirwa?
Peaches - yakanaka uye yakaipa
Kupfekedza-mukadzi ane simba
Canape ine salmon
Imbwa ine meso maziso - chii chaunofanira kuita?
Kutanga kusati kwasvika pamasvondo makumi maviri nemaviri
Shiraplant saladhi neii uye anyezi
Zvipfeko zvevakadzi kuhofisi
Ndeipi ngozi kune hemoglobin yakakura?
Omelette with cheese - recipe
Chipfeko chakasvibirira chakaitwa ne polypropylene